Honor က Android Q ပါ ၀ င်မယ့်ဖုန်းများစွာကိုအတည်ပြုလိုက်ပါတယ် Androidsis ပါ
Android Q သို့မည်သည့်ဖုန်းများအားအဆင့်မြှင့်တင်မည်ကို Honor မှအတည်ပြုခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Huawei သည်စာရင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည် Android Q သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သွားသောသူတို့၏ဖုန်းများ။ ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာပဲစပိန်ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီကဖုန်း ၁၇ လုံးနဲ့အတူဒီစာရင်းကိုထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဤစာရင်းထဲတွင်အဘယ်သူမျှမ Honor ဖုန်းကိုရှိခဲ့သည်ပေမယ့်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကသူတို့ကိုသူတို့ကိုသူတို့စာရင်းထဲကိုချန်ထားပေးပြီးမွမ်းမံသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာဂုဏ်ပြုပြင်သစ်ဖြစ်ခဲ့သည် သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်များတွင်မော်ဒယ်များထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် Android Q. သုံးစွဲခွင့်ရမည့်အမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤမော်ဒယ်များရှိသည့်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ဖုန်းတွင်ဤအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုအမှန်တကယ်ရရှိလိမ့်မည်ဟူသောသတင်းကောင်းရှိနိုင်သည်။
ကြေငြာချက်တစ်ခုအရကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းများကပြောကြားသည် သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Android updates များကိုဆက်လက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူတို့ဟာ Android Q ကိုသုံးခွင့်ရလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်အထိအတည်ပြုပြီးသောမော်ဒယ်များမှာ Honor View20 နှင့် Honor 20 series (20 Lite, Honor 20 and 20 Pro) တို့ဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်ဂုဏ်သိက္ခာ (@Honor_FR) ဇြန္လ 26, 2019
အများဆုံးဖွယ်ရှိ မွမ်းမံနိုင်ရန်အတွက်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများပိုများလာသည်ဤရွေ့ကားယခုအချိန်အထိအတည်ပြုတစ်ခုတည်းသောသူများဖြစ်ကြ၏ပေမယ့်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးအတွင်းသာနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာဒီအကွာအဝေး၏မော်ဒယ်များမျှော်လင့်ထားရန်ဖြစ်ပါသည် EMUI 9.1 ကိုလည်းရယူပါ။ ယခုအချိန်အထိ Huawei မော်ဒယ်များသာအတည်ပြုခဲ့သည်။
ဤကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ပြန်ချက်များသည်မှတ်ချက်များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Huawei နှင့် Honor နှစ်ခုစလုံးက၎င်းကိုပြောဆိုကြသည် သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေဟာမွမ်းမံချက်တွေကိုဆက်ပြီးလက်ခံရရှိမှာဖြစ်တယ် စုစုပေါင်းပုံမှန်နှင့်အတူ Android ၏။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၏သက်တမ်းတိုးသို့မဟုတ်ပတ်သက်။ ထင်မြင်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာရပ်တန့်မထားဘူး။ သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကမှန်လားမမှန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူး။
ဤအတောအတွင်း ဂူးဂဲလ်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောပါဘူး။ Huawei ကသူတို့ဖုန်းမှာ Android Q ရှိမယ်လို့ကြေငြာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာမှမပြောခဲ့သလို Honor ကဒီ tweet နဲ့လည်းမတူခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ ပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများတွင်မသေချာမရေရာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာဖြစ်သောကြောင့်သူတို့မရောက်ရှိနိုင်သည့်အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုကိုရရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Android Q သို့မည်သည့်ဖုန်းများအားအဆင့်မြှင့်တင်မည်ကို Honor မှအတည်ပြုခဲ့သည်
Galaxy A10 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
Poco Launcher + Pixel Launcher = အံ့မခန်း Launcher !!